I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) ipowder (10161-34-9) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Trenbolone powder Series / Trenbolone Acetate (Tren ace) powder
3.00 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 3 amanqaku umthengi
SKU: 10161-34-9. iindidi: I-Trenbolone powder Series, Anabolics Steroids
I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) ividiyo ye powder
I-trenbolone i-Acetate (i-Tren ace) Abalinganiswa basisiseko
Isitoreji sokugcina: 0-6 ° C
I-trenbolone e-Raw Acetate (iTren ace) ekusebenziseni i powder kwimjikelezo ye-steroids
I-Trenbolone Ipetet acetate ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-Tren A, i-Tren ace powder (i-CAS 10161-34-9), i-Revalor, i-Finaplix, i-Finajet, ngabanini bomzimba okanye abanikazi be-UGL.
I-Trenbolone ephakamileyo ye-Acetate powder
I-Trenbolone i-Acetate powder isetyenziswa rhoqo kwii-35-150 mg / ngosuku, kwaye ngokuqhelekileyo i-50-100 mg / ngosuku.
Uninzi lwabasebenzisi bafumana i-50-75 mg / usuku ukuba libe libala lokulinganisa elifanelekileyo, linika inzuzo enhle njengenxalenye ye-anabolic stteroid stack.
I-Trenbolone i-Acetate powder (i-CAS 10161-34-9) idla ngokusetyenziswa kwii-35-150 mg / ngosuku, kwaye ngokuqhelekileyo i-50-100 mg / ngosuku. Umlinganiselo we-35 mg ngokuqhelekileyo ufanelekile kuphela xa uvakalelwa kakhulu kwiimpawu ezichaphazelekayo ze-trenbolone. Xa ukusetshenziswa kwe-trenbolone oku kuphantsi kwaye umjikelezo osebenzayo unqwenelekayo, enye injectable anabolic steroid kufuneka ifakwe. I-Masteron yinto enhle kule njongo. Enye, ukhetho oluhlukileyo luyi testosterone.
Ngokubhekiselele kwi-150 mg / figure ephezulu, oku ngokuqhelekileyo kusetyenziselwa injongo yokwandisa inkqubo yesantya ngokuqhathaniswa ne-100 mg / imini kunokuba kuphuculwe ubuninzi okanye ukuphuculwa kwamandla, okwenziwe ngokugqithiseleyo okanye ekugqithiseni kakhulu kwi-100 mg / ngosuku.
Ezi xabiso ze-milligram ziphantsi ngokuqhelekileyo kwi-anabolic steroid enejectject. Ingxenye yesizathu kukuba i-trenbolone inamandla kakhulu (inempumelelo nge-milligram.) Esinye isizathu kukuba ngenxa yokuba i-acetate ester ikhanya ngokungaqhelekanga, ipesenti ephakamileyo kakhulu yesisindo se-Trenbolone Acetate powder molecule yi-steroid esebenzayo.
Isixwayiso kwi-Tren ace powder
Abantu abaninzi baqaphele, akufanele uthathe iClen ngaphezulu kweeveki ze-2 ngokulandelelana. Oku kungenxa yokuba abafumana i-receptors badinga ixesha lokusetha kwakhona kwaye i-Clen ayiyi kusebenza xa ungayithathi ikhefu, kwaye akukho siqinisekiso sokuba abalamkeli bakho baya kubakho.
Ingxaki enzulu ye-Equipoise yimizuzu yesigxina esiphila kuyo, mhlawumbi ubuncinane ubuncinane beentsuku ze-12. Oku kubangela ixesha elongezelelweyo lexesha emva kwejoza lokugqibela apho amazinga awanelanga ngokwaneleyo ukufumana i-anabolism efanelekileyo, okanye aphantsi ngokwaneleyo ukuba avumele ukubuyiswa kwenzeke. Isisombululo kule ngxaki kukusebenzisa i-Equipoise kwinxalenye yokuqala yomjikelezo.
Ngokwahlukileyo, ipesenti ye-trenbolone enanthate ye-steroid esebenzayo iphantse i-20% ephantsi. Ngenxa yesi sizathu, i-dositol ye-intanethi ye-trenbolone inanthate iyimfuneko encinane ngaphezu kwe-acetate. Ukuze i-enanthate, i-dosing ye-weekly iyonke i-300-800 mg.
Ngokungafani ne-Trenbolone i-Acetate powder ene-half-life of only 1 ngosuku kwaye ngoko kufuneka ijojowe imihla ngemihla, i-trenbolone enanthate ifakwe ngamaxesha angama-2-4 ngeveki. Ubomi besiqingatha mhlawumbi malunga neentsuku ze-5.
Ukuba awuqinisekanga malunga nokuphendula komntu siqu kwi-trenbolone, i-acetate ester ikhethwayo njengoko icacisa inkqubo ngokukhawuleza. Kuyinto enqweneleka kakhulu ekusebenziseni umjikelo omfutshane okanye kwiiveki zokugqibela ezijikelezileyo ngenxa yokuba ukukhawuleza ngokukhawuleza kunika ishintsho ngokukhawuleza ekubeni ube namazinga aphezulu afanelekileyo kwiziphumo eziphantsi ukuvumela ukufumana.
Nangona ukusetyenziswa kwe-trenbolone akudingekile ukuphumeza iziphumo ezintle kumjikelezo we-anabolic steroid, ingaba luncedo oluphawulekayo kwiziphumo ezinjalo.
I-Trenbolone I-acetate iphunga-i-melting point = 200-205 F / 90-92 ° C
I-Trenbolone I-Acetate powder Marketing
III. i-Trenbolone Acetate (iTren ace) ye powder HNMR
Indlela yokuthenga i-Trenbolone i-Acetate powder (i-CAS 10161-34-9); ukuthenga i-Tren ace powder kwi-AASraw
I-AASRaw inikezela ubumsulwa 99% i-trenbolone acetate ipowder eluhlaza kumacandelo omzimba okanye iibhabhini zangaphantsi zokusetyenziswa kwegciwane ekusebenzeni ukuze kuzuze ubuninzi, ukuzuza amandla.
I-Trenbolone i-Acetate powder Recipes